Semalt Expert: Kudzivirira Bot Traffic MuGoogle Analytics Rimwe Uye Kwavose
Kana iwe uchigara uchishandisa Google Analytics, zvichida unoda kuziva kuti ungawana sei kufamba kwepawebsite yako. Kana iri kuuya kune vanhu chaiwo, pane zvimwe kutsvaga injini kugadzirisa uye maitiro ehupfumi ekuchengetedza. Munguva pfupi yapfuura, yakambotaurwa kuti bots nemari yakaipa yekambani inokwana makumi mashanu muzana yemotokari yose panzvimbo chaiyo - usa rdp server linux. Tinotarisira kuti vazhinji vemotokari iyi vanobviswa kubva kuGoogle Analytics nemhando dzakasiyana-siyana dzekushandisa uye nzira.
Max Bell, nyanzvi inotungamirira kubva kune Semalt , inopa dzimwe nyaya dzinobatsira munyaya iyi.
Pane zvose zvakaipa bots bots uye bots bots vanoenderera mberi vachikamba nzvimbo yako uye zvinyorwa zvayo kune zvinangwa zvayo. Dzimwe dzebhoti dzinokanganisa nzvimbo dzako kuti dzisakanganise mavhareji ewebhu uye kuwedzera iyo mari yevatenzi venzvimbo.
Zvaisazova zvisina kunaka kutaura kuti mabhizinesi eGoogle search injini haana kubviswa kubva kuGoogle Analytics, uye haufaniri kuchinja zvirongwa zvavo. Zvisinei, mamwe maitiro emabhodhi akaoma kubata nawo uye haateveri mazano akambotaurwa mumahwendefa e robots.txt yewebsite, kana mumata tags. Vanoramba vachikamba mapeji enyu ewebhu uye vanokupai mhinduro dzakaipa. Mabhodhi akanaka, zvakadaro, anodzivirira zvikumbiro kubva kutumirwa kumaseva eGoogle Analytics kuchengetedza nzvimbo yako yakachengeteka uye yakachengetedzwa. Mazuva ano, nhoroondo yakaipa yeb bots yepamusoro makumi matatu kubva muzana yehuwandu hwehutaneti, maererano nehuwandu hweIncapsula. Yakava mvumo yekuwana mhinduro kuitira kuti tikwanise kufuta mabhogi akaipa kubva kuGoogle Analytics uye mhinduro dzayo. Izvi zvichachengetedza zvose data yedu uye webhusaiti yedu kubva mumugwagwa wakaipa uye bots.
Chii Chingaitwa Nezvo?
Pane nzira dzakasiyana dzekubvisa bots kubva kuGoogle Analytics. Zvimwe zvezvinhu zvaunofanirwa kukura mupfungwa ndezvi:
1. Unofanira kugara uchitarisa bhokisi iri mu Admin View chikamu kuti ubvise mabhoti maviri anozivikanwa uye asingazivikanwi.
2.Uye unofanira kubvisa mabhodhi pamwe nekuvhara ma IP aderesi.
3.Ungagona kubvisa mabhoti nekubatsirwa nevashandisi vevashandi, izvo zvinoita kuti zviratidzo izvi zvive nyore uye nokukurumidza.
Nezvinhu izvi mupfungwa, unogona nyore nyore kuchengetedza nzvimbo yako kubva kumabhoti anogona.